Wararka Maanta: Sabti, Nov 3 , 2018-Galmudug oo u ballansan shir lagu xalinayo khilaafka maamulka dhaxdiisa ah
Khilaafka Galmudug ayaa gaaray in labo madaxweyne uu yeesho maamulka, iyadoo maanta Cadaado looga dhawaaqay gole Wasiirro cusub.
Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo la hadlay VOA ayaa sheegay 7da bishan loo balan san yahay kulan ballaaran oo la doonayo in lagu xallyo khilaafka labada dhinac.
Qaban qaabada kulanka waxaa iska leh xildhibaannada Aqalka sare ee ka soo jeeda deegaannada Galmudug oo ku howlan sidii loo dhameyn lahaa khilaafka taagan.
‘’Waxaan rajeynayaa in kulanka uu noqdo mid lagu soo afjaro khilaafka u dhaxeeya dhinacyada Galmudug, waxa Gaalkacyo isugu imaanayana waa dadka lahaa dhismaha Galmudug, waxaana rajeynayaa in uusan mar kale dib u dhicin uu qabsoomo waqtiggii loo qorsheeyay oo ah 7da bishan’’ ayuu yiri Suldaan Cabdinaasir.
Suldaanka ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee kulanku yahay sidii loo heli lahaa Galmudug oo ka heshiisa siyaasada, taasoo macnaheedu yahay in meel leysugu keenayo dhinacyada kala fadhiya degmooyinka Dhuusa-Mareeb iyo Cadaado.
Tan iyo markii la aas-aasay maamul gobollleedka Galmudug hadba waxaa ku horgudbanaa caqabado kala gadisan oo siyaasadeed, iyadoo khilaafka ugu weyn uu hadda yahay kan u dhaxeeya dhinacyada kala fadhiya labada degmo ee Dhuusa-Mareeb iyo cadaado.